बुटवल हिँडेकी युवतीको पटक–पटक बलात्कार, पर्साबाट उद्धार - Meronews
बुटवल हिँडेकी युवतीको पटक–पटक बलात्कार, पर्साबाट उद्धार
दया दुदराज २०७८ साउन १ गते १५:३९
काठमाडौं । असार २७ गते १९ वर्षीय कल्पना (नाम परिवर्तन) बुटवल जान भन्दै २ वर्षीय छोरासहित कलंकी पुगिन् । कलंकीमा पुगेपछि उनले ना. ५ ख २८७० नम्बरको ट्रकमा बुटवल जान भनेर चडिन् ।
तर, बुटवल जान भनेर हिँडेकी कल्पनालाई ट्रक चालक सुनिल महत्तोले चितवनको रामनगर पुर्याएर बलात्कार गरे । बलात्कारको सिकार भएकी उनलाई उक्त ट्रकका चालकले बुटवल पठाइदिन्छु भन्दै असार २९ गते दिउँसो ना. ५ ख ३३६९ नम्बरको ट्रकमा चडाइदिए ।
ना.५ ख ३३६९ नम्बरको ट्रकले उनलाई बुटवल पुर्याएन । तर, उनलाई पर्साको विरगञ्ज पुर्याए । बुटवल पुर्याइदिने भन्दै झुक्काएर पर्साको वीरगञ्ज पुर्याइएकी उनलाई सोही ट्रकका चालक शिववालक महत्तोले पटक–पटक बलात्कार गरे ।
बलात्कारको सिकार बनेकी कल्पनालाई ती ट्रकका चालकले वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ स्थित ड्राइपोर्टमा छाडेर निस्किए । अलपत्र अवस्थामा रहेकी उनलाई प्रहरी चौकी सिर्सियाबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरीले उद्धार गर्यो ।
उद्धारलगत्तै थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा दुवै ट्रक चालकलगायत व्यक्तिहरूले बलात्कार गरेको खुलेपछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका २१ बस्ने ३० वर्षीय सुनिल महत्तो र पोखरिया नगरपालिका ६ बस्ने २५ वर्षीय शिववालक महत्तोलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरूले कल्पनालाई पटक—पटक बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको हो ।
घटनामा संलग्न अन्य २ जना फरार व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुका साथै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।